Somalia: Magaalada Dhuusamareeb oo uu Dagaal ka socdo - Wargane News
Home Somali News Somalia: Magaalada Dhuusamareeb oo uu Dagaal ka socdo
Somalia: Magaalada Dhuusamareeb oo uu Dagaal ka socdo
Wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal ba’an uu ka socda magaalada Dhuusamareeb.
Xalay sakhdi dhexe ayaa mar keliyaa dadka Dhuusa Mareeb waxaa hurdada ka kiciyay rasaas xoog leh oo ka dhacday saldhiga magaaladaasi. Inkasta oo dagaalku uu markii dambe istaagay, haddana saaka aroortii ayuu dib u qarxay, arrintaasi oo sababtay in dad badan ay magaalada ka qaxaan.
Dagaalka ayaa waxa uu u dhaxeeyaa maleeshiyaad ka tirsan maamulka Ahlu Sunna iyo ciidamo uu wato nin horey uga goostay Milatariga Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaankaasi.
Afhayeenka maamulka Ahlu-Sunna Mursal Xefow oo BBC-da la hadashay ayaa sheegay in dagaalkan uu ahaa mid la soo abaabulay oo lagu soo qaaday maamulka Ahlu-Sunna, waxa uuna ku eedeeyay in Mudug ay dagaalka ku lug leedahay.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi.
Balse afhayeenka ayaa sheegay in dhankooda ay jiraan laba qof oo dhaaawac ah, oo sidoo kalana arkay meydka afar qof, ha yeeshee ma jirto wararkani cid xaqiijin
Deg Deg: Arooski Qarniga Oo Ka Dhici Doona Magaalada Hargeysa Iyo Fanaanka Axmed Zaki Oo Guursan Doona Fanaanad Ka Tirsan Kooxda Xiddigah Geeska Balse Waa Tumo + Muuqaal
Somaliland: Madax-Dhaqameed Ka Hadlay Dadkii Lagu Laayey Hawaday, Codsiyana U Diray Madaxweynaha Kililka 5aad
Go’aanka Maxkamadda Sare Ee Maraykanku Ka Gaadhay Dacwaddii Maxamed Cali Samater Waa Guul darro ku Dhacday Cadawga Somaliland .